Xulka - VOA
Arbaco 6 July 2022
Wareysi gaar ah: Ra'iisal Wasaaraha Somalia
Ra’isul Wasaaraha Soomaaliya Xamza Cabdi Barre ayaa wareysi gaar ah oo uu siiyay VOAda waxa uu ku sheegay inuu soo xulan doono Gole Wasiiro oo tayo leh oo isugu jira rag iyo dumar, isagoo dhinaca kale rajo ka muujiyay in isaga iyo madaxweynaha ay si dhow u wada shaqeeyn doonaan
Barn. Hambalyada iyo Heesaha
Barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha ee toddobaadkan waxaa innala socodsiinaya Ibraahim Xasan Maxamuud (Daanduray) iyo Nuur Xasan Nuur (Bukhaari)
Aragtida Dhalinyarada Qurbaha ku dhalatay ee Doorashada Soomaaliya
Dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhashay ama ku koray qurbaha ayaa ka mid ahaa Soomaalida indhaha ku heysa doorashada maanta ka dhaceysa Soomaaliya. Warbixintaan waxaa inoo diyaariyay, wariyaha VOA-da Nur Hassan Nur Bukhari.
Sideey u arkaan dhalinyarada qubaha ku dhashay Doorashada Madaxtinimada Soomaaliya
Nagula Ciid wareysi aanu la yeelannay al-fannaan Salaad Darbi
Barnaamijkeennii Gaarka ahaa ee Munaasabadda Ciidul-Fitriga waxaa maanta qeyb ka ahaa, wareysi aanu la yeelannay fannaanka weyn ee Soomaaliyeed, Salad Maxamed Shardi (Derbi).
Ciidanka Ukraine oo hakiyey kuwa Ruushka iyo rajada wadahadallada oo shaki laga muujiyey
Waxaa shaki laga muujiyey sii socoshada wadahadallada u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine ka dib markii madaxweynaha Ukraine uu sheegay in ay adag tahay in nabad la gaaro xilli ay dadka dalkaasi aad uga careysan yihiin xad-gudubyada la sheegay in ciidanka Ruushku ay geysteen
Madaxa Barnaamijka Cuntada Adduunka (WFP) ee QM, David Beasley ayaa sheegay in “dadku ay gaajo u dhimanayaan” magaalada hareeraysan ee Mariupol ee dalka Ukraine
Magaalada Hargeisa iyo guud ahaan Somaliland weli waxay madaxda iyo dadkuba hadal hayaan musiibadii dabka aheyd ee dhawaan baabi’isay suuqa Waaheen. Hase yeeshee, waxaa dhinaca kale, sii xoogeysanaya saameynta baaraha ku dhuftay Somaliland oo aad hadda moodo in arrinta waaheen lagu iloobay
Barnaamijkii Faaqidaadda Todobaadkan waxa aan toddobaadkan ku eegaynaa xaaladda doorashada Soomaaliya iyo khilaafaadyada cusub ee ku soo biiray
Xubinimadii Ruushka ee Golaha Xuquuqda Aadamaha ee QM oo la hakiyey
93 dal ayaa u codeeyey go’aanka joojinta, 24 way diidday, halka 58 dalna ay ka aamuseen. Golaha ayaa xubinimadii Ruushka u hakiyey arrimaha la xiriira “xadgudubyada waaweyn ee abaabulan ee xuquuqda aadamaha” iyo xadgudub dhinaca sharciga dawliga ah, kuwaas oo laga galay dalka Ukraine
Isku aadka Koobka Adduunka oo la shaaciyay
Waxaa caawa fiidki magaalada Doha ee caasimadda dalka Qatar, looga dhawaaqay Isku-aadka Ciyaaraha Koobka Adduunka ee sannadkaan 2022-ka. 29 ka mid ah 32-ka waddan ee ka qeybgali doona ciyaarahan oo lagu marti gelin doono dalka Qatar, ayaa diyaar ahaa..
Dunida Muslimka oo berri bilaabeysa soonka Bisha Ramadan